HappY bIrThDay mY loVeLY frI
ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းလေး စိန်စိန်သန်း (ခ) ဖြိုးလင်းပိုင်ရဲ့ ၂၃မြောက် မွေးနေ့လေးပါ။ မေလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ယောက်ဖ ညီလေး စိန်စိန်သန်းရေ (ဒီနာမည်က ကျွန်တော် ပေးထားတာပါ)
hAppY biRtHdaY စိန်စိန်သန်းရေ ၂၃ ပြည့်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ
ယောက်ဖ ညီလေးရေ လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ပါစေ
ဒါလေးက ကျွန်တော် hi5 ဆိုတဲ့ Network လေးမှာ comment ပေးထားတာပါ။
ဈေးကြီးကြီး ဘီယာလေးလဲ သောက်နိုင်ပါစေ
လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပါစေလိုက ဆုတောင်းပေးတယ် သူငယ်ချင်းရေ
၂၃နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ
သာယာချမ်းသော ဘ၀တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ပါစေ သယ်ရင်း
မင်းရဲ့ သူငယ်ချင်း ဖိုးဂျယ်
(ဒါလေးက facebook မှာ သွားပေးထားတာ )
ဒါလေးက သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်း လက်ဆောင် ပေးထားတာပါ။
ဒါကတော့ ယောက်ဖ ညီလေး စိန်စိန်သန်း (ခ) ဖြိုးလင်းပိုင်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ဒူဘိုင်းမှာ အိုက်တိုးပဂေးဆံဆိုလား။ ကြမ်းတိုက်ဆိုလားပဲ လုပ်နေတယ်။ သူနဲ့ ကျွန်တော် တွဲရိုက်ထားတဲ့ ပုံက ရှာလို့ မတွေ့လို့ မထည့်တော့ပါဘူး။ အလိုလိုနေရင်း ဒီကောင် မှေးမှိန်သွားမှာ မလိုလားလို့ပါ။
တင်ပြသူ ဖိုးဂျယ် မှာ 1:54 AM 8 ယောက် ပြောခဲ့တယ်
လူတစ်ယောက်မှာ သည်းခံစိတ်ဆိုတာ အတိုင်းတာတခုထိပဲရှိတယ်။ အရမ်းသည်းခံနိုင်တဲ့ သူကို ကြိုက်သလောက် စိတ်ဆိုးအောင်လုပ် ပြီးရင် ပြန်ချော့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူသည်းခံနိုင်တဲ့ အတိုင်းတာကျော်သွားရင် ပုံမှန်လူထက် ဒေါသထွက်တာ၊ စိတ်နာတာ ပိုကြီးတယ်။ (စိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးနော်၊ စိတ်နာတာနဲ့ စိတ်ဆိုးတာ မတူဘူး။ စိတ်ဆိုးတာ ချော့လို့ရတယ်။ စိတ်နာရင် တသက်လုံး အမာရွတ်ကျန်နေရော သတိရတိုင်း ပြန်ပြန် သတိရနေတတ်တယ်။) အမှတ်ကြီးတဲ့သူ၊ ကလဲ့စားပြန်ချေတတ်တဲ့သူဆို ပိုဆိုးတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် ခဏခဏ မာန၊သိက္ခာကို ထိလာတာ ဆိုရင်တော့ ပြောဖွယ်ရာမရှိပေါ့။ စဉ်းစားကြည့်လေ ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူတောင်းစားဖြစ်ဖြစ်၊ သူဌေးသားဖြစ်ဖြစ်၊ ပညာရှိဖြစ်ဖြစ်၊ ပညာ မတတ်တဲ့သူ ဖြစ်ဖြစ် မာနနဲ့ သိက္ခာကတော့ သူဟာနဲ့သူ ရှိတာပဲ ဘာမှ မတတ်တဲ့၊ ဘာမှ မရှိတဲ့ သူဆို ပိုပြီး မာနကြီးတတ်တယ်။ သူမှာ ဘာမှ မရှိတော့ အားငယ်စိတ်နဲ့ ကျားကန်ထားရတော့ ပို မာနကြီးတယ်။ သိက္ခာကို ပိုတန်းဖိုးထားတယ်။ ကျွန်တော့်လို ခပ်ပိန်းပိန်းကောင်လေးမှာလဲ ခပ်ရဲ့ရဲ့ မာနရှိပါတယ်။ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာရယ်မဟုတ်ပဲ ပြောလိုက်တာဆိုပေမဲ့ သူများရဲ့ မာန၊သိက္ခာကို ထိပါးသလို ဖြစ်သွားရင် ပြောတဲ့ သူက ဘာမှ မဟုတ်ပေမဲ့ ခံရတဲ့ သူက နင့်နေအောင် ခံရတတ်တယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သူများကို ပြောခဲ့ဖူးသလို အပြောလဲ ခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အခုလဲ လူပုံလည်မှာ မျက်နှာကို စီးထားတဲ့ ဖိနပ်နဲ့ ချွတ်ပြီး ဖြတ်ရိုက်သလိုကို ရှက်သွားတယ်။ ဘယ်သူမှ မရှိပေမဲ့ ကိုယ်လိပ်ပြာ ကိုယ်ရှက်တယ်။ ဘယ်သူမှ မသိပေမဲ့ ကိုယ်ကိုတိုင်သိတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဲ့လောက် ရှက်စရာကောင်းလောက်အောင် လုပ်နေမိတယ်လို့ မသိဘူး။
တင်ပြသူ ဖိုးဂျယ် မှာ 2:11 AM 20 ယောက် ပြောခဲ့တယ်
အဲ့အခါ ငါ့ဖာသာ ကိုယ်မျက်နှာ ကိုယ်ကြည့်ပြီး
ပါးနား ပိတ်ရိုက်ချင်မတတ် အရှက်ရခဲ့တယ်
မမှတ်မရှိတဲ့ ငါ မှတ်ရှိအောင်ကြိုးစားမယ်။
ချီးတောထဲ လသာတယ် ဆိုဆို
ပိန်းတိန်းပိန်းတိန်းကောင်မှာလဲ ခပ်နဲ့နဲ့ မာန ရှိပါတယ်။
တင်ပြသူ ဖိုးဂျယ် မှာ 2:45 AM 10 ယောက် ပြောခဲ့တယ်
ငါ ဘယ်အချိန်က ဒီချောင်ထဲကို
ရောက်နေတာလဲ ? ? ? ?
ငါ့ကို ငါ ပြန်ကြည့်တော့
ပင်ကူမျှင်နဲ့ ဖုန်တွေ တက်လို့
ရုန်းလေ ရှုပ်လေ ရှင်းလေ မှောင်လေ
ပြီး ဒီ အခန်းကျဉ်းလေးထဲ ပြန်ရောက်တာပဲ
နင် အကွက်ရွှေ့ချက်က နိုင်း(၉) လောက်ရှိတယ်။
ဒါပေမဲ့ ခဏခဏ ရွှေ့ခံနေရတော့ ကြိုသိနေတယ်။
ကဲကဲ နောက် ရွှေ့နည်းလေးပြောင်းပါဦး။
နိုင်း = ကမ်းကုန်တာကိုဆိုလိုတာပါ။ ၉ ပီးရင် ၁၀လေး)
တင်ပြသူ ဖိုးဂျယ် မှာ 3:02 PM 11 ယောက် ပြောခဲ့တယ်
ပြည်ထောင်စုနေ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီးအား ကဗျာ၊ Essay များဖြင့် ဂုဏ်ပြုခြင်း အစီအစဉ်
ကိုအိမ်မက်မည်းဆီမှ တိုက်ရိုက် ကူးချပါသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည်ဖြစ်သော (၆၂) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့နှင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မွေးနေ့ တို့အား အမှတ်ရ၊ ဂုဏ်ပြုသောအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ Myanmar Genius Forum တွင် ကဗျာနှင့် Essay ပြိုင်ပွဲအား ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရရှိမှုအား မည်သည့် Admin, Moderator တို့ကမှ ရွေးချယ်ခြင်းပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပဲ Vote ပေးခြင်း စနစ်ဖြင့်သာပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Vote ပေးရာတွင် မည်သည့် နည်းပညာပိုင်း၊ နည်းစနစ်ပိုင်းကိုမှ တင်းကြပ်ထားခြင်းမရှိပဲ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး အပြန်အလှန် ယုံကြည်နားလည်မှု၊ လေးစားမှုတို့ကို အလေးထားသောအားဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ခွင့်ပြုထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသူများအတွက် ငွေကြေး၊ လက်ဆောင်များ ပေးအပ်သွားမည်မဟုတ်ပဲ ဆုရရှိသူအား ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ပျော်ရွှင် ဂုဏ်ယူမိနိုင်စေရန် အတွက် ကျွန်တော်တို့ Forum ထဲမှာရှိသော Member များ၏ Blog များတွင် သက်ဆိုင်ရာ Blogger များ၏ ခွင့်ပြုချက် ရယူ၍ ၎င်းတို့၏ Blog အသီးသီးတွင် ဖော်ပြဂုဏ်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ် သည်။ ထို့နောက် ပြိုင်ပွဲများအားလုံး ပြီးစီးသွားသောအခါ အကောင်းဆုံး ကဗျာ ၁၀ ပုဒ်နှင့် Essay ၁၀ ပုဒ်အား စုစည်းကာ Ebook ဖြင့် အမှတ်တရ ထုတ်ဝေမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် Myanmar Genius ၀ိုင်းတော်သားများမှ ဆုရရှိသူများအား ၎င်းတို့ ဆန္ဒရှိပါက အလိုရှိရာ Subdomain နှင့်အတူ Hosting များကို FTP account, Database access စသည်များ ဖြင့် Fully Access ပေးကာ ထပ်ဆင့် ဂုဏ်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပါဝင်ရေးသားလိုသူများအနေဖြင့် အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များအား ရှေးဦးစွာ ဖတ်ရှု၊ နားလည်း၊ လက်ခံပြီးသည့်နောက် သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ် များ၏ အောက်၌ လွတ်လပ်စွာ စတင်ပါဝင် ရေးသားနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်ရေးသားမှုများအား ပြည်ထောင်စုနေ့အတွက် ပြိုင်ပွဲအား ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့ ည ၁၂ နာရီတွင် ပိတ်မည်ဖြစ်ပြီး ၁၁ ရက်နေ့တွင် Vote ပြုလုပ်၍ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် အသိပေးမည်ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီးအတွက် ပို့စ်များအား ၁၁ ရက်နေ့ ည ၁၂ နာရီတွင် ပိတ်မည်ဖြစ်ပြီး ၁၂ ရက်နေ့တွင် Vote ပြုလုပ်ကာ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်အသိ ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရက်အကန့်အသတ်နဲ့သွားခြင်းအား နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါရန်နှငမိမိ တတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်ရေး သားခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ပြုကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
၁။ ပါဝင်ရေးသားလိုသူများသည် Member အဖြစ်ဝင်ရောက်ရန်။
၂။ အပြုသဘောဆောင်သော ရေးသားချက်များသာ ရေးသားရန်။
၃။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ တိုက်ခိုက်မှုများရေးသားခြင်း မပြုလုပ်ရန်။
၄။ Forum အရှည်တည်တံ့ရေးအား (တိုက်ရိုက်) ထိခိုက်နိုင်သော ရေးသားမှုများ မပြုလုပ်ရန်။
၆။ ပြိုင်ပွဲနှင့် မဆီလျော် (သို့) မသက်ဆိုင်သော ရေးသားချက်များ မပြုလုပ်ရန်။
၅။ Essay အပိုင်းတွင် ဆောင်းပါး၊ ၀တ္ထုတို စသည်ဖြင့် မည်သည့် စကားပြေအမျိုးအစားကို မဆို ရေးသားနိုင်သည်။
၇။ ပါဝင်ရေးသားသူများသည် ကလောင်အမှန်နှင့်သော်လည်းကောင်း ကလောင်ဝှက်နှင့်သော်လည်းကောင်း ရေးသားနိုင်သည်။
၈။ ဖတ်ရှု၊ ဆန္ဒပြုမဲပေးသူများ အနေဖြင့် ပါဝင်ရေးသားကြသူများ၏ ကဗျာများ၊ Essay များအတွက် ဝေဖန်မှုများကိုမူ ပို့စ်များအောက်တွင် သွားရောက်ရေးသားခြင်းများမပြုလုပ်ပဲ ဝေဖန်ချက်များအတွက် သီးသန့်ထားရှိပေး သောခေါင်းစဉ်အောက်တွင်သာ ရေးသားပေးကြရန်။
၉။ အထက်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အတူ Forum စည်းကမ်းများ နှင့် ကိုက်ညီခြင်းမရှိသော ရေးသားမှုများအား Forum Admin နှင့် Moderator အဖွဲ့မှပြိုင်ပွဲတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင် မည် မဟုတ်ပါ။ (လိုအပ်ပါက ဖြေရှင်းချက်များ ပြန်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။)
၁၀။ ပါဝင်ရေးသားကြသူများအနေဖြင့် အထက်ပါ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းချက်များကို ဖတ်ရှု လက်ခံပြီး ကျွန်တော်များ၏ Forum တွင်ပျော်ရွှင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ စာပေပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခု အဖြစ် ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ကြရန် စီစဉ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ပါဝင်ရေးသားကြသော ပညာရှင်၊ ၀ါသနာရှင်များ၏ Personal Information များကိုကျွန်တော်တို့ Myanmar Genius Member များမှ အပြည့်အ၀ကာကွယ်ပေးသွားမည် ဖြစ်သော်လည်း မိမိရေးသား တင်ပြသော ကဗျာ သို့မဟုတ် Essay အတွက်ကိုမူ စာရေးသူတွင်သာ တာဝန်အပြည့်အ၀ရှိမည်ဖြစ်သည်။
P.S- ပြိုင်ပွဲဆိုတာထက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဒီနေ့ထူးနေ့မြတ်တွေကို မမေ့ပျောက်ပဲ အမှတ်တရရှိနေသေးကြောင်း ဂုဏ်ပြုပြသလိုသော ကြောင့် စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တင်ပြသူ ဖိုးဂျယ် မှာ 9:10 PM 1 ယောက် ပြောခဲ့တယ်
အမျိုးအစား ကိုယ်တိုင်ရေး မဟုတ်သော
ကိုဝင်းမင်း ဖတ်ချင်တဲ့ tag လေး “မတရားမှုတခုမှာ သင်ဟာ ကြားနေတယ်ဆိုရင်... သင်ဟာ ဖိနှိပ်သူဘက်က လိုက်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့ အတူတူဘဲ” တဲ့ ကိုဝင်းမင်း ခင်ဗျာ အကို tag ထားတာက နိုင်ငံရေး ဆန်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်က နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ နားမလည်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လေးစားသမှုနဲ့ အကို tag ထားတာကို နားလည်သလောက် ရေးလိုက်ပါတယ်။
ဖိနှိပ် သူက ဘယ်သူလဲဆိုတာလဲ အရေးကြီးပါတယ်။ တခါတုန်းက ရပ်ကွက်တခုမှာ ညနေတိုင်း အရက်မူးပြီး ပြန်လာရင် ရန်အမြဲဖြစ်တဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ညနေတိုင်းယောင်္ကျားက မူးလာရင် သူ့မိန်းမကို ရိုက်နှက်တတ်တယ်။ အစကတော့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က ၀ိုင်းဆွဲပေမဲ့ နေ့တိုင်းလိုဖြစ်နေတော့ ထုံးစံတခုဖြစ်လာတယ်။ ဒါနဲ့ တစ်နေ့တော့ ထုံးစံအတိုင်း ယောင်္ကျားက မူးပြီး ရိုက်နေတာကို သူ့မိန်းမက အော်နေကျအတိုင်း " အောင်မလေး ဒီအတိုင်းပဲ ကြည့်နေတော့မှာလား အရပ်ကတို့ရဲ့ " ဆိုပြီး ငိုကြီးချက်မနဲ့ အော်တာပေါ့။ ဒါကို လမ်းမှာ သွားနေတဲ့ လူစိမ်း ယောင်္ကျားတစ်ယောက်က လူစွမ်းကောင်းလုပ်ပြီး အဲ့မိန်းမရဲ့ ယောင်္ကျားကို ၀င်ထိုးလိုက်ပါရော ဒီမှာတင် ခုဏက ငိုကြီးချက်မနဲ့ မိန်းမက ချက်ချင်းပဲ ထပြီး "ကျွန်မယောင်္ကျားကို လူရမ်းကားတစ်ယောက် ၀င်ရောက် ထိုးကျိတ်နေပါတယ် " ဆိုပြီး အော် ပါလိမ့်ရောလား။ ဒီတော့ ခုဏက လူစွမ်းကောင်းလဲ နောက်ကျတဲ့ ဖနောင့် သစ္စာဖေါက်လို့ သဘောထားပြီး ပြေးပါလိမ့်ရောလား။
အဲ့လို မတရားတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာရော ကိုဝင်းမင်း ရပ်ကြည့်နေမလား???? ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မလား ????? ပြေးပေါက်မှားမယ်နော့
အိမ်ထောင်စုတစုမှာ အဖေက ရမ်းကားပြီး သားသမီးတွေ မတရားရိုက်နှက် ဆုံးမနေတယ်ဆိုရင်ရော ကိုဝင်းမင်း ရပ်ကြည့်နေမလား???? ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မလား ????? ဒါဆိုရင်တော့ သေချာတယ် တစ်အိမ်လုံး ၀ိုင်းရိုက်တာ ခံရမယ်။
လက်ထဲမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ လုပ်ချင်ရာလုပ်နေမှန်းသိသိကြီးနဲ့ လုပ်နေတာကိုရော ကိုဝင်းမင်း ရပ်ကြည့်နေမလား???? ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မလား ????? ကိုဝင်းမင်း လက်ထဲမှာ တခုခုရှိတယ် ဆိုရင်တောင် လုပ်ရဲလို့လား။ ကိုယ်ကို့ကိုယ် အရင်မေးကြည့်နော့။
ချစ်သူနှစ်ဦးမှာ တစ်ဦးဦးက မတရားသဖြင့် ချူစားနေတယ် ဆိုပါဆို ကိုဝင်းမင်း ရပ်ကြည့်နေမလား???? ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မလား ????? သတိထား ပါးရိုက်ခံရမယ်နော့
တင်ပြသူ ဖိုးဂျယ် မှာ 1:10 AM 12 ယောက် ပြောခဲ့တယ်
ငံပြာရည်ပုလင်းမှောက်ခြင်း (new year)
မှတ်ချက်းကျွန်တော့်အမဖြစ်တဲ့ မဝါဝါခိုင်မင်းရဲ့  အမှတ်တရလေးများ ဘလောဂ်မှ ကူးယူဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်..
တီတီဝါ ခွင့်ပြုသလို အားလုံးလဲ ခွင့်ပြုတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။
နှစ်သစ်မှာ အားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
တင်ပြသူ ဖိုးဂျယ် မှာ 9:00 AM 15 ယောက် ပြောခဲ့တယ်
ဒီပုံအကောင်းက နန်းညီ လုပ်ပေးထားက ဒီဖက်ကတော့ ကျနော် ပျက်ဆီးအောင် လုပ်ထားတာလေးပေါ့
ထုံးစံအတိုင်း ဟိုခွေ ဒီခွေ
ဟိုလျှောက် ဒီလျှောက် လုပ်ရတာ
အရသာတွေ့နေတယ် . . . .။
ဒါနဲ့ အဓိပ္ပာယ်မဲ့ မှန်ရှေ့ရပ်မိလိုက်တယ်
မှန်ထဲမှာ ဘယ်လဲဟ ! ! ! !
ငါဟာ ငါနဲ့ မတူတော့ဘူး . . . .
သေချာကြည့်လေ မတူလေပဲ . . . .
ငါ ဒီမျက်နှာနဲ့ နေတာ
ဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲ ? ? ? ?
မှန်မကြည့်ပဲ အိပ်နေတာ ကြာပြီလေ။
အရင် မျက်နှာ ပြန်လိုချင်နေတာလား ? ? ? ?
ဒါပေမဲ့ . . . .
ဒီမျက်နှာက နည်းနည်း လူရာဝင်သလိုပဲ
တင်ပြသူ ဖိုးဂျယ် မှာ 2:50 AM 17 ယောက် ပြောခဲ့တယ်